October 2009 | TechSectors
12:38 AM LeaveaComment
သီချင်းတွေ အမြဲ နားထောင်နေဖြစ်တယ် ...
တစ်ခုခုကို လွမ်းတဲ့ အခါ
တစ်စုံ တစ်ခုကို အလို မကျတဲ့ အခါ
ဖြေးဆေး ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ နာရီတစ်ချို့ကို ဖြတ်သန်းချင်တဲ့ အခါ
There'saman standing on the corner
Withasign sayin "will work for food"
You know the man
You see him every morning
The one you never give your money to
You can sit there with your window rolled up
Wondering when the lights going to turn green
Never knowing whatacouple more bucks
In his pocket might mean
What if he's an angel sent here from Heaven
And he's making certain that you're doing your best
Trying to forget what you saw in his face
Knowing deep down it could have been his saving grace
What if he's an angel
Living right above you in apartment G
There's alot of noise coming from the ceiling
And it don't sound like harmony
You can sit there with your TV turned up
While the words and his anger fly
Come tomorrow when you see her with her shades on
Can you look her in the eye
What if she's sent here from heaven
A little girl on daddy's lap
Hiding her disease withabaseball cap
You can turn the channel
But what if you were sitting in her daddy's shoes
Maybe she's an angel
And she's making certain you're doing your best
Dear my Mom
2:35 PM LeaveaComment
ငယ့်ကို မေမေ့ အကြောင်း ပြောပြမယ် ဆိုပြီး မပြောပြ ဖြစ်သေးဘူး .. မေမေ့ အကြောင်း စပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး မေမေ့ မွေးနေ့ ကနေ စပြီး ပြောပြမှရမယ် .. မေမေ့ကို ၁၉၆၀ ဧပြီလ ၂၀ ရက်မှာ မွေးခဲ့တယ် .. မေမေက ဗုဒ္ဓဟူးသမီး .. အဲမှာ ကို တစ်ခု တွေးမိတာက ငယ်ကလည်း ဗုဒ္ဒဟူးနေ့ ညနေပိုင်းမှာ မွေးတဲ့ သူ ဆိုတော့ မေမေနဲ့ ငယ် အဆင်မှ ပြေပါ့မလားလို့ တွေးမိတယ် .. မြန်မာ အယူအဆ အရ ကိုက တွက်မိတာလေးပါ .. သိပ် အယုံအကြည် ရှိနေလို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မေမေ့မှာ မွေးချင်း ကိုးယောက် ရှိပြီး မွေးချင်း ကိုးယောက်မှာမှ မေမေ တစ်ယောက်တည်း ဘွဲ့ ရခဲ့တာ မို့လို့ မေမေက ပညာတတ်ဘွဲ့ရတွေကို လေးစားတယ် အထင်ကြီးတတ်တယ် .. သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘွဲ့ ရခဲ့ပေမယ့် ဖေဖေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကတည်းက အလုပ် တစ်ခုမှ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး .. ဒါကလည်း မြန်မာမှု ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိန်းကလေးတိုင်း ဒီလိုပဲ ဖြတ်သန်းနေကြတာပဲလေ .. အဲ့ခေတ် အခြေအနေတုန်းက ယောကျာင်္း တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်အားခက အိမ်ထောင်စု တစ်ခုလုံးကို ထောက်ပံ့လုပ်ကျွေးနေနိုင်တယ်လေ .. ခုခေတ်မှာတော့ အနဲနဲ့ အများ ကွားခြားကုန်ကြပြီ ..
မေမေက အပြင်မှာ လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့သူ တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမယ့် အိမ်ထဲမှာတော့ ထိုင်နေတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုး မဟုတ်ဘူး .. အစဉ်သဖြင့် မေမေက အိမ်အလုပ်တွေ တစ်ယောက်တည်း တကုပ်ကုပ်နဲ့ လုပ်နေတတ်လို့ ကိုက “ မေမေက အမြဲအဝတ်လျှော်ရရင် လျှော်ရ .. မလျှော်ရရင် အိမ်ရှင်းနေရမှ နေတတ်တာလား “ လို့ စပြီး မေးတော့ မေမေ အဲတာကိုပဲ ပြုံးပြီး ကျေနပ်နေတတ်တယ် ..
ကို ၅ တန်းနှစ် အရောက် ဖေဖေ အလုပ်တာဝန်နဲ့ နယ်ကို ပြောင်းရတော့ မေမေနဲ့ ကိုတို့ ရန်ကုန်ကို ကိုတို့ ပညာရေးအတွက် နယ်ကို လိုက်မသွားပဲ ကျောင်းတက်ဖို့ ပြောင်းလာ ဖြစ်ခဲ့တယ် ။. ယောကျာင်္းလုပ်သူနဲ့ ကွဲကွာပြီး နေရပေမယ့် မေမေ အိမ်ထောင်ရေးစည်းစောင့်တယ် .. အပျော်အပါးကို ပွဲလမ်းသဘင် ဆိုတာတွေ ဘေးနားမှာ ရှိရင်တောင် မေမေ စိတ်မဝင်စားတတ်ဘူး .. ကိုတို့တွေ လူလားမြောက် ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့ကိုပဲ မေမေ အာရုံစိုက်ခဲ့တယ် ..
ကိုတို့ ၁၀ တန်းအောင်တော့ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ အတွက် နယ်မှာရောက်နေတဲ့ ဖေဖေက မထောက်ပံ့နိုင်တော့လို့ မေမေ့အတွက် ဖေဖေဖန်တီးပေးထားတဲ့ အိမ်ကို မေမေက လျော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပစ်ခဲ့ပြီး အရင်းအနှီးလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲကို ထည့်ခဲ့တယ် .. အရင်းအနှီးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဆိုပေမယ့် အမြတ်မရပဲ ကိုယ့်အရင်းကိုယ် ပြန်ထုတ်စားရတဲ့ အရင်းအနှီးတစ်ခုမို့လို့ မေမေနဲ့ ဖေဖေ့အိမ်ဆိုတာ ကိုယ်တို့ရဲ့ ပညာရေးဆိုတဲ့ ဂယက်အောက်မှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ် …
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မေမေဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် အခြေချလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကောင်းကောင်း မစီမံမခန့်ခွဲတတ်ပါဘူး .. အဲတာကြောင့်လည်း ကိုယ်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်တစ်လုံး ဆုံးရံှုးခဲ့ရတာပေါ့ .. မေမေ့ကို အပြစ်တင်တာ မဟုတ်ပါဘူးလေ .. မဆုံးရှုံး သင့်တဲ့ အရာတစ်ခု ပျောက်ဆုံးခဲ့ရလို့ သင်ခန်းစာယူမိတာပါ .. အိမ်ရောင်းပြီးတဲ့ နောက် ဖေဖေ့နောက်ကို မေမေ လိုက်သွားခဲ့တယ် .. ကိုယ်တို့ကတော့ မေမေတို့နဲ့ ဝေးရာဆီမှာ ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့တယ် ..
သူတို့ဆီမှာ ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှ မရှိတော့ဘူး ငယ် ..
အိမ်ရောင်းချပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကို့အကို အိမ်ထောင်ကျတော့ သူတို့မှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ တွေထဲက အနဲအကျဉ်းကို ကို့အကို အိမ်ထောင်ဦး အတွက် ထပ်ခွဲတမ်းချ ပေးခဲ့တယ် .. မေမေနဲ့ ဖေဖေ့အကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ မိဘမေတ္တာဆိုတာ ပိုပြီး မြင်လာမိတယ် . ကိုတို့တွေ မိဘနေရာ ရောက်လာခဲ့ရင်ရော ကိုယ်တို့ မိဘတွေလောက် သားသမီးအပေါ် တာဝန်ကျေပွန်နိုင်ပါ့မလား .. မေမေ့ အကြောင်း အသေးစိတ် မဟုတ်ပေမယ့် ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲ ငယ် မနဲမကျဉ်း သိလောက်ပါပီ ..
ကိုယ်တို့တွေ ဆက်ပြီး စဉ်းစားရမှာက ..
ကိုယ်တို့အပေါ် မိဘဝတ္တရား ကျေပွန်ခဲ့တဲ့ ကိုတို့ မိဘတွေအတွက် ကိုတို့ သားသမီးဝတ္တရား ကျေပွန်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ ...
ကိုယ်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်အတွက် ကိုယ်တို့ ဘယ်လို ပေးဆပ်ကြမလဲ ဆိုတာ …